MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 6
>Than Win Hlaing - Burma Second President - U Ba Oo
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး - ခွေးသရမ်းကြီး လွတ်နေပြီ၊ ၆၆ ကောင် ...
>Kan Htun Thit - Shot Story
>Burmese Way of Life - Long queue to petrol station
>LA Thagyan 2011 Invitation
ဘ၀အဓိပ္ဗာယ်ဆိုတာ (သို့မဟုတ်) အမေ့လမ်းစဉ် (Zaw Htet (Pyin Ma Nar))
မင်းညွှန့်လှိုင် - သူမ (ကဗျာ)
ကျော်ကျော် (မြရည်စမ်း) ● သေခြင်းများ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ မိုးမခ အတွဲ (၅)၊ အမှတ် (၁) မေ၊ ၂၀၀၈ ထုတ် မဂ္ဂဇင်းမှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ (၁)...
မင်းချောမြင့် ● ကျွတ်​​တော့မယ့်​ လ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ မနက်​ဖြန်​က စ​ရေ ရမယ်​ လပြည့်ညဆို​တော့ ကြည်​​တော့ ကြည်​ညိုရမယ်​ ​သေနတ်​ကိုင်​ပြီး ကာကွယ်​တာနဲ့ လုံ​လောက်​ပါပြီလား မက်​​ဆေ့တွေ ဘ​လော့ထားရုံနဲ့...
Photo – Facebook သားကြီးမောင်ဇေယျ – စစ်ကို ရပ်ကြမလား အသက်ရှု ရပ်ကြမလား (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ “ ဦးဇေယျရေ လာကြည့်ပါဦးဗျာ ” ကျွန်တော့် အယ်ဒီတာ...
မောင်လူပေ – F-7 ဂျက်တိုက်လေယာဉ် ပျက်ကျတယ်ဆိုလို့ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ မင်းဘူးမှာပျက်ကျတဲ့ F-7နှစ်စီးရယ်၊ အရင်လက တောင်ငူမှာပျက်ကျတဲ့ F-7တစ်စီးရယ်ကြောင့် တစ်လအတွင်း လေသူရဲသုံးဦး၊ မြေပြင်က ကျောင်းသူလေးတစ်ဦး အသက်ပေးခဲ့ကြရတယ်။...
လေးနှစ်အတွင်းတပ်မတော်လေယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှု ကိုးခုတွင် ၁၃၃ ဦး သေဆုံး. Myanmar Now (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂ဝ၁၈ ပြီးခဲ့သည့်လေးနှစ်အတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်လေ၏ လေယာဉ်နှင့် ရဟတ်ယာဉ် ၉ စင်းသည် မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ခ်ပေါ်မှာလည်း … (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ခင်ဇော်မိုး ● အရောင်ရင့်ရင့် အလွမ်းများ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈ ဒီနေ့ရွာနေတဲ့မိုးက ငယ်ငယ်ကကြည့်ဖူးတဲ့ ဖြူမဲရုပ်ရှင်ပေါ်က မျက်နှာပြင်လို အမှုန်မွှားတွေ ထနေသလိုမျိုး လေးပါ။ အပူလွန်ကဲတဲ့ အရင်နေ့ရက်တွေအပြီးမှာ မိုးအေးအေးလေးဖြစ်နေပြီး တစ်ခါတစ်ခါ...
စိုးခိုင်ညိန်း ● စစ်ပွဲများ (၈) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈ မြို့က တစပြင်တခုလို ကျီးနဲ့ ဖုတ်ဖုတ် မီးသဂြိုဟ်စက်ရဲ့ မီးခိုးခေါင်းတိုင်မှာ မီးခိုးဟာ မနားတမ်း ထုတ်လွှတ်လို့ မြို့ကြီးတခုလုံး ပစ်ပြေးရလောက်အောင်...
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၂၆)
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၂၆) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈ တိဗက်ပြည်မှာ တိုက်ခတ်နေသည့် မုန်တိုင်းတွေက တကယ်ပဲပြီးဆုံးသွားပြီလား။ သစ်လွင်တောက်ပသည့် အရုဏ်ဦးက အမှန်တကယ်ပဲ...
တင်လတ်ကို – ကျန်ရစ်သူမိသားစု ၃ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ လက်နက်ချ အညံ့ခံတာ မဟုတ်သော်ငြား သတိရ။ ရှေုးဖြစ်ဟောင်းအောက်မေ့ဖွယ်ရာတွေက နာကျင်မှုခဏသက်သာရာရ၊ ဓာတ်ပုံလေးထောင်ထားတယ် ပန်းအိုးလေး ရှေ့ချထားတယ် ရည်စူးပြီး အစားအသောက်တွေ...
ဇင်လင်း ● ၂၀၂၀ မတိုင်မီ ဒီမိုကရေစီ ဖယ်ဒရယ်ဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်နိုင်ဖို့လို (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ ယခု တလောတွင် ပြည်သူများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် လိုလားနေကြသည်။ ပြည်သူလူထု အနေဖြင့်...
ကိုသန်းလွင် ● အိန္ဒိယ၏ အမြင့်ဆုံးတရားလွှတ်တော် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ (၁) သတင်းစာကို ဖတ်လိုက်လျှင် အိန္ဒိယ၏ အမြင့်ဆုံးတရားလွှတ်တော်သည် အချိန်တိုင်းမှာ နေရာတိုင်းကို ရောက်ရှိနေသည် ဟူသောအမြင်ကိုမြင်မိရပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပါတ်အတွင်းက...
ငြိမ်း (ပဲခူး) ● “ည” များကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ ကျွန်တော်ဟာ ကုမ္ပဏီတခုမှာ စာရင်းစစ် အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ “ည” များကို ဖြတ်ကျော်နေပါတယ်။ အဲဒီလို “ည”...
မောင်လူပေ – ဆီဈေးလား၊ ဆက်တက်ဦးမှာ
မောင်လူပေ – ဆီဈေးလား၊ ဆက်တက်ဦးမှာ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ လောင်စာဆီတွေဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီဈေးတွေတက်သည်။ ဆက်တက်သည်။ တက်ပြီးရင်းတက်သည်။ နှစ်ကုန်အထိလည်း ပြန်ဆင်းရန် အကြောင်းမမြင်သေး။ ဆက်တက်ဖို့သာရှိ၏။ အကြောင်းကား အီရန်ကို...
သန်းဝင်းလှိုင် -သမိုင်းတကွေ့မှ ဦးပိန်တံတား (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ ကဝိလက္ခဏာဒီပနီကျမ်း၌ မင်းကြီးသီရိမဟာဇေယျသူက “ရေစစ်ကိုင်း၊ လှိုင်းပခန်းငယ်၊ လယ်တောင်ကွင်း၊ စပါးရမည်းသင်း၊ အင်းတောင်တမန်၊ ကန်မိတ္ထီလာ” ဟူ၍ ဖွဲ့ထားသည့်အတိုင်း အမရ...
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● ဖုယွင်သပိတ်စခန်းရိုက်ပွဲမဖြစ်မီ ရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း အကာအကွယ် မရခဲ့ဟုဆို (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ — ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အမည်မသိလူအုပ်၏ ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်...
သင်းရည်လွင် ● ကျွန်တော်ရပ်နေတဲ့မှတ်တိုင် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ပေါင်မုန့်အသိုးတွေ ငါ့ ဝမ်းပူစာတောင်တန်းတွေ လူထုအုံကြွမှုတွေ အပျက်တွေ ထမ်းပြန်လာတဲ့ခေတ်ကြီး ပန်းချီကားလှလှတွေ ရုပ်ရှင်ပိုစတာကြီးတွေ ကားပါကင် ကျပ်ကျပ်တွေ ပန်းခြံထဲက လူတွေ...
K ငြိမ်းချမ်း ● တော်လှန်ရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက် (သို့) လွမ်းတရတဲ့ ပဒိုမန်းရှာ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ “ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုလောက်တဲ့ သမိုင်းဖြတ်သန်းမှုရှိရမယ်” ဒီစကားကို ပြောခဲ့သူကတော့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးသမားကြီး ပဒိုမန်းရှာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့လို...
မြဇင်ယော် ● ရွာပြန်ခရီး (အသွား) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ရွာကိုပြန်ချင်လိုက်တာများ ခြေကို ရွနေတာပဲ။ မရောက်ဖူးတဲ့ဒေသကို သွားရမှာထက် ကိုယ့်ရွာကိုယ်ပြန်ရမှာ ပိုပျော်တယ်။ ပြန်မယ့်နေ့မှာ ကိုယ်က မနက် ၉...
Page6of 933«1...45678...933»